के हो हिन्दू गर्भवती महिलाले गर्नै पर्ने सिमंतोन्नयन संस्कार ? - Internet Khabar
Home Dharma के हो हिन्दू गर्भवती महिलाले गर्नै पर्ने सिमंतोन्नयन संस्कार ?
के हो हिन्दू गर्भवती महिलाले गर्नै पर्ने सिमंतोन्नयन संस्कार ?
एजेन्सी । सिमंतोन्नयन संस्कार गर्भवती महिलालाई चौथो, छैठौँ वा आठौँ महिनामा गराउने गरिन्छ। जसको उद्देश्य गर्भको सुद्धीकरण र आमालाई राम्रो सोच्ने प्रेरणा मिलोस भन्ने हो।
परम्परागत मान्यता अनुसार गर्भमा चौँथो महिनापछि शिशुका अंग प्रत्यांग बढ्दै जान्छन् र उनमा चेतना आउन सुरु हुन्छ। यो अवस्थादेखि गर्भमा रहेको शिशुले आमाको पेटभित्रै केही कुरा सिक्छ सुरु गर्ने गर्दछ। उसको मन र वुद्धीमा नयाँ चेतना जागरित हुन लाग्दछ।
त्यस्तैले यो अस्थामा शिशुको मन र मस्तिष्कमा राम्रो संस्कार दिनका लागि आमालाई जस्तो संस्कार दिइन्छ। त्यसको प्रभाव गर्भमा भएको शिशुमा निकै गहिरो रुपमा पर्दछ। यो अवस्था गर्भमा भएको शिशुका लागि निकै सम्बेदनशील अवस्था हो।
शास्त्रमा उल्लेख भएअनुसार माता मदालसाले आफ्नो बच्चाको गुण, कर्म, र स्वभावका बारेमा पूर्व घोषणा गरेकी थिइन्। त्यस्तै उनले त्यही अनुसार निरन्तर चिन्तन, क्रियाकलाप, रहनसहन, आहार विहार र व्यवहार गर्ने गरेकी थिइन्, ता की बच्चा उसै पृष्ठभूमिको बनोस् जो उनले चाहेकी थिइन्। त्यस्तै भक्त प्रहलादकी आमा कयाधूलाई देवर्षी नारद भगवानले भक्तिको उपदेश दिने गर्दथे, जो प्रहलादले गर्भमा सुन्ने गरेका थिए। त्यस्तै व्यास पुत्र शुकदेवले आफ्नी आमाकै गर्भमा सबै ज्ञान प्राप्त गरेका थिए।
अर्जुनले आफ्नी गर्भवति पत्नी सुभद्रालाई चक्रव्यूह वेधनको शिक्षा दिएका थिए, जुन गर्भमै शिशु अभिमन्युले सिकेका थिए। त्यही शिक्षाका कारण १४ वर्षकै उमेरमा अभिमन्युले एक्लै ८ महारथिबाट महाभारत युद्धको चक्रव्यूह भेदन गरेका थिए।
शास्त्रमा उल्लेख भए अनुसार पिपल, बर बनस्पतिद्धारा पतिले गर्भपति पत्नीलाई सिमंत, माग गर्दै ऊँ भूर्विनयामी, ऊँ भूर्विनयामी पढ्दै तल लेखेको मन्त्रोउच्चारण गर्नु पर्दछ।
येनादिते सीमातं नयति प्रजापितर्महते सौभगाय ।
तेनहमस्यै सिमातं नयामी प्रजास्यै जरट्टष्टिं कृणोमी ।।
जनु प्रकार देवमाता अदितीको सिमातोन्नय प्रजापतिले गरेका थिए, त्यसै अनुसार गर्भवति महिलाको सिमांतोन्नयन गर्दै गर्भमा रहेको सन्तान वृद्धावस्थासम्म दिर्घजीवी बनोस भन्ने कामना गर्ने। सिमंतोन्नयन संस्कारमा प्रयाप्त घ्यू मिलाएको खिचडी खुवाउने परम्परा छ। यसको उल्लेख गोभिल गृहसूत्रमा गरिएको छ।
किं पश्यस्सीत्युक्त्वा प्रजामिति वाचयेत् तं सा स्वयं ।
भुजीत वीरसुजीवपत्तित ब्राहण्यो मंगलाभिवाग्य पासिरन्।।
अर्थात यो के देखिन्छ भनेर सोध्दा, गर्भवति महिलाले म सन्तान देख्छु भन्नु पर्दछ। खिचडी आफैले सेवन गर्नु पर्दछ। गर्भवति महिलालाई आशिर्वाद दिदै त्यहाँ उपस्थित महिलाले वीर सन्तान जन्माउनु भनि कामना गर्नु पर्दछ।
Previous articleयू–१५ साफ च्याम्पियनसीपमा सहभागी नेपाली टोली भुटान प्रस्थान
Next article३० केजीको माछाले बदलिदियो यी दाजु-भाईको भाग्य !